JINGHPAW KASA: ဗမာစစ်တပ် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ကူညီတိုက်ခိုက်
ဗမာစစ်တပ် စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ကူညီတိုက်ခိုက်
ဒီဇင်ဘာ (၁၄) သောကြာ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေဖြစ်သော လဂျားယန်နှင့် နားလုံ ကျေးရွာများတွင် ယနေ့မနက် (၃း၀၀) နာရီအချိန်ခန့် မှစပြီး ကေအိုင်အေ ဗဟိုလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာ ဗမာအစစ်တပ်ဘက်မှ စစ်သား (၄၀) ကျော်ကျပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ သေဆုံး ဒဏ်ရာရမှု များပြားပြီး အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်လာရသောကြောင့် ဗမာစစ်တပ်မှ စစ်ရဟတ်ယာဉ် (၃) စီးဖြင့် လာရောက်တိုက်ခိုက် ကူညီပေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ပြင်းထန်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Over (40) Burmese soldiers were died in La Ja Yang and Na Lung villages, which is under KIA (5th) Brigade area on 14th December according to KIA front line officer report. At 03:00 AM on that day, KIA central security troops opened fire the invader Burmese Government troops in La Ja Yang and Na Lung villages. Due to Many soldiers were injured and died on that battle, Burmese Government army sent (3) military helicopters to fight KIA troops and the battle was continuously fighting severely.
Hpamyi lang yang lang u-ga..., YESU HKRISTU HTE YEWOWA GOD.. e...... Jinghpaw Wunpawng Myusha ni hpe..,Myen a-lata na hkyela ri.., ngu kyuhpyi nga n-ngai...,GOD.. a-chyeju hte.., KIO.., KIA.., Lata de Myen hpe ap ya rit.. ngu kyihpyi nga n-mgai...,
Grai n'gun lu, grai shakawn Arawng La, nga ga ai law.. Wunpawng Mungdan hte Mungdan Sha niamatu n hkring n sa shakut nga ai Myutsaw share-shagan yawng hpe K.K galoi mung bausin makawp maga nga u ga Akyu Hpyi dat ga ai.
ဒီမှာညီလေး သတင်းရေးတယ်ဆိုတာ မျှမျှတတရေးမှ
မှန် တယ်သတင်းဆို တာ မျှတမှသတင်းလို့ခေါ်တယ် လအူ ရဲ့။
အဲဒီသ တင်း စာ က နည်း နည်း မှန် တာ ပါ သေး တ ယ်။အ ခေါင် ရေ့။
မှန်တာပြောရင်နာတတ်ကြပါတယ် မမှန်တဲ့သတင်းဖတ်ချင်ရင် မြန်မာ့အလင်းနှင့်ကြေးမုံကိုဖတ်ပါ မင်းပြောတဲ့မျှတမှုဆိုတာကို ကြေးမုံနှင့်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမင်းဘထွေးပုံအကြီးကြီးပါတာကိုဝယ်ဖတ်ပါ ယောက်ဖ လအ ခေတ်အမြင်နည်းသူရဲ့
အမြင် များ ရင် ဝေ ပါ ဦးဗျာ။ဗဟုသု တတိုး တာ ပေါ့ ယောက် ဖ ရေ။
စစ်ဆိုတာ နှစ်ဦးဖက်လုံးသေကြတာပဲ။ယောက်ဖရေ မင်းတို့ဘက်ကလည်း ဘယ်လောက်ကျလဲ ထည့်ပြောပါအုံး။
kia ကမသေမျိုးလေ ဟား ဟား
သူများသိမှာစိုးလို့အစုလိုက်အပြုံလိုက်
မြုပ်ထားတာ ရဲဘော်တွေမရှိတော့လို့ 
kia တွေများများသေလို့ ဘဲ
မှန် တယ်။ပိုက် ကြီး တာ တောင် ဆွဲ တယ် ဆို ဘဲ။